သမ္မာတရားကိုထွက်ရှိဟုန်းဟုန်းဖြစ်ပါတယ်: အဘယ်ကြောင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကြံပိုမြန်ယခင်ကထက်ပြန့်နှံ့ - သတင်း Rule
မှ 9/11 ပဲရစ်တိုက်ခိုက်မှုမှ, အီဘိုလာရောဂါမှ Isis မှ, တိုင်းအဓိကကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအဖြစ်အပျက်ကို 'truthers' 'ကနေသက်ဆိုင်ရာကောင်တာ-ဇာတ်ကြောင်းကိုဆွဲဆောင်, အချို့သောဒါကြောင့်သူတို့ကလူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုကျော်ယူကြောင်း All-လွှမ်းခြုံ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ယုံကြည်ဖို့ကြိုးနေကြတယ်, အသစ်တစ်ခုကိုစာအုပ်စောဒကတက်သည်အဖြစ်? ထိုအထိုကဲ့သို့သောအမှန်တကယ်အကျိုးရှိသောဖြစ်စဉ်းစားနိုင်?
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “သမ္မာတရားကိုထွက်ရှိဟုန်းဟုန်းဖြစ်ပါတယ်: အဘယ်ကြောင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကြံပိုမြန်ယခင်ကထက်ပြန့်နှံ့” ဒါဝိဒ်သည် Shariatmadari ကရေးသားခဲ့သည်, The Guardian ကစနေနေ့က 26 ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလများအတွက် 2015 10.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
"ငါသည် Final Fantasy VII အကြောင်းစာဖတ်ခြင်းသတိရ, ငါတကယ်မျှော်လင့်ခဲ့ရုပ်ရှင်. အကြှနျုပျ၏ကနဦးတုံ့ပြန်မှုကနှစ်နှစ်ကွာခဲ့ကြောင်းစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည် - ။ ထို့နောက်အားဖြင့်ငါတို့သည်စစ်ရေးထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာဖြစ်င်သောကွောငျ့ "ဒါဟာခဲ့ 2004, နဲ့မဿဲ Elliott သည်နက်နဲရာအရပ်၌ခဲ့သည်. Elliott သည်, San Antonio တွင်ထံမှ, တက္ကဆက်ပြည်နယ်, သူရှိစဉ်အခါပထမဦးဆုံးပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီမှရေးဆွဲခဲ့ 19, ၏နောက်ဆက်တွဲထဲမှာ 9/11. "ဒါဟာကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ခံရနိုင်ကြောင်းသူတွေဖတ်ရင်ဘာမှန်းမသိသလိုပဲ,"ဟုသူကယနေ့ပြောပါတယ်. ဖွစျခဲ့ပွီးဘယျအရာ၏အာရုံစေရန်မိမိအရှာပုံတော်ခုနှစ်တွင်သူအမှတ်မထင် နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော "truther" လှုပ်ရှားမှု, အမေရိကန်အစိုးရ၏တံခါးနားရက်စက်ယုတ်မာမှုအတွက်အပြစ်တင်ရေးသားထားပါတယ်ကအမြင်တစ်ခုကလက်ရှိ.
Related: အဘယ်ကြောင့်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီဒါကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်? podcast
အများဆုံးပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီထွက်ချထားကြသည် "ဒီလမ်း, တဦးတည်းအရာအမြဲအခြားစေပါတယ်, ဒါကြောင့်ထိုအရပ်မှငါသည်တအာဏာရအုပ်စုကမ္ဘာသစ်မိန့်အရာအားလုံးကိုကြိုးကိုင်ဟုခေါ်တွင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချဖြစ်လာခဲ့သည်. ဤအချက်များအားလုံးနှင့်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လွတ်လပ်မှုတစ်ခုပြီးပြည့်စုံဖယ်ရှားရေးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မယ်,"သူကပြောပါတယ်. တစ်ဦးကဆယ်စုနှစ်နောက်ပိုင်း, Elliott သည်, ယခု 34, တစ်ဦး "ပြန်လည်ထူထောင်" ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီဖြစ်ပါတယ်, အမြဲအချို့လျှို့ဝှက် posits တဲ့ worldview အပေါ်သူ၏နောက်သို့လှည့်ပြီးလျှင်, သာမန်လူများ၏အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်သရုပ်ဆောင်အစွမ်းထက်အင်အားစု. အဆိုပါပြောင်းလဲမှုတဖြည်းဖြည်း လာ. ,, ဒါပေမဲ့အခုသူကအလွန်ကွဲပြားခြားနားထင်. "သင်ကပင်အများအပြားမရနိုင် 50 အမှုအရာအပေါ်သဘောတူရန်ပြည်နယ်. ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ရရှိရန်ဥရောပတိုက်သားများနှင့်အာရှသားနားချဖို့ဆိုတာကံကောင်းပါစေ။ "
၏စိတ်ဒဏ်ရာမှ Elliott သည်ရဲ့တုံ့ပြန်မှု 9/11 ပုံမှန်မဟုတ်သောဝေးခဲ့. အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုဒါကြောင့်မကြုံစဖူးခဲ့ကြ, ထို့ကြောင့်ကြီးကျယ်, ကျွန်တော်တို့ကိုအများတို့သည်လည်းထိုသူတို့အအာရုံအောင်ရုန်းကန်ကြောင်း. အစောပိုင်းအစီရင်ခံစာများရှုပ်ထွေးသို့မဟုတ်ဆနျ့ကငျြခဲ့ကြ: ရလဒ်အဖြစ်အချို့သောသံသယနှင့်အတူဖြစ်ရပ်များ၏တရားဝင် version ကိုကုသ. အလှည့်ရှိသူတို့၏တစ်ဦးအချိုးအစားကြီးမားသောအတိုင်းအတာအပေါ် fakery နှင့်ညှိနှိုင်းလိုအပ်မယ်လို့တစ်ဦးရှင်းပြချက်အဘို့အ plumped.
ဒီကျွန်တော်တို့ကိုအံ့သြမနေသင့်: သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှော့ခ်ပြီးနောက်ထပ်ခါတလဲလဲကြောင်းတစ်ပုံစံင်, နှင့်ပဲရစ်မြို့တိုက်ခိုက်မှုများ၏နောက်ဆက်တွဲထဲမှာ, ဒါကြောင့်နောက်တဖန်က၎င်း၏ဦးခေါင်းကိုမျိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီ. ပြင်သစ်မြို့တော်အပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများတစ်ရက်အတွင်းမှာပဲ, တစ်ဦးဒါခေါ် "အယူမှားအလံ" စစ်ဆင်ရေး - ဘလော့ဂ်များသူတို့ကအစိုးရ၏လုပျငနျးခဲ့ကြကြောင်းငြင်းခုံပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့. အဆိုပါတောင်းဆိုမှုများ Isis အနောက်ပိုင်းအစိုးရများ၏တမင်ဖန်တီးမှုသောစိတ်ကူးပေါ်ငြိမ်ဝပ်စွာနေ. ပိုများသောမကြာသေးမီက, Syed Farook ၏မိသားစုများအတွက်ရှေ့နေ, အစန်း Bernardino shooters တယောက်, ကွံဖထင်ကြေးလောင်စာ လာသောအခါသူကပြောပါတယ်: "လှုံ့ဆျောမှုတွေအများကြီးမွတ်စလင်အသိုင်းအဝိုင်းဆီသို့ဦးတည်သေနတ်ထိန်းချုပ်ရေးသို့မဟုတ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုသို့မဟုတ်မုန်းတီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်ဟုဖြစ်စဉ်များကိုအလေးပေးသို့မဟုတ်ဖန်တီးရန်ဤအချိန်တွင်ရှိပါတယ်။ "
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ၏က Round-The-နာရီလွှမ်းခြုံကျွန်တော်တို့ကိုအနက်ကိုဘော်ပြရန်အဘို့အအကြပ်အတည်းနှင့်ပရမ်းပတာတစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်ပေးဝေရေးလည်းမရှိဆိုလိုသည်. ဝှက်ထားလျက်ရှိသောလက်ဖြင့်ဆွဲခံရကြိုး၏ပုံပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျော်ဖြေရေး၏အဓိကအစားအစာမှာ, ကနေ Spectre ရဲ့ Blofeld ၏ Baroque ပူးပေါင်းကြံစည်မှုမှ လန်ဒန်သူလျှို, ယခုနှစ်အရှိဆုံးကောင်းချီးသည်ဗြိတိသျှပြဇာတ်ထဲကတစ်ခု, အရာအကြောက်လွန်ရောဂါစတိုင်တစ်ခုအံ့မခန်းဥပမာထဲမှာတူညီမှုများပျက်စီး. ဒါဟာပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီအတွက်ယုံကြည်ချက်ကပိုကျယ်ပြန့်လာမယ့်, ကပြောပါတယ် ဗိုင်းရပ်စ် Swami, Anglia Ruskin တက္ကသိုလ်လူမှုရေးစိတ်ပညာပါမောက္ခ: သုတေသနသေးပြုသည်ရသေးစဉ်, သူသည်ငါ့ကိုပြောထားပါသည်, ပြီးခဲ့သည့်ရာစုနှစ်တစ်ဝက်သို့မဟုတ်ဒါတွေအတွက်ပူးပေါင်းလုပ်ကြံအတွက်ယုံကြည်ချက်မျှမျှတတတည်ငြိမ်နေခဲ့သည်အကြံပြုသို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထားအများကြီးရှိပါတယ်. အဘယျသို့ပြောင်းလဲသွားပြီ, သို့သော်, အသစ်သီအိုရီဖွဲ့စည်းထားတဲ့နှင့်အတူအမြန်နှုန်းသည်. "ဒါဟာအများကြီးပိုဘက်ပေါင်းစုံကမ္ဘာတစ်လက္ခဏာင်,"သူကပြောပါတယ်. အင်တာနက်အရာအားလုံးကိုတက်အမြန်နှုန်း, ပူးပေါင်းကြံစည်မှုစိတ်တစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရေးဆွဲရန်ခွင့်ပြု. မတူတာကတော့, အဲဒီအကြောင်းသီအိုရီအဘို့လအတွင်းယူ ပုလဲဆိပ်ကမ်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့.
ကရင်ဒေါက်ဂလပ်, အခြားလူမှုရေးစိတ်ပညာရှင်, ဤအချက်ကိုပဲ့. "လူတွေကရဲ့ဆက်သွယ်ရေးပုံစံများပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအတော်လေးအများကြီးပြောင်းလဲပြီ. သူတို့တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးပုံပြင်အကြောင်းကိုသံသယအနည်းငယ်အမြိုးအနှယျရှိတောင်မှပဲအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူလူပူးပေါင်းကြံစည်မှုသတင်းအချက်အလက်ရယူရန်အဘို့အဒါဟာင်. အွန်လိုင်းစ သွား. သင်တို့ကဲ့သို့တူညီသောလမ်းခံစားရသူအတခြားလူကိုရှာဖွေရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ "
စဉ်းစားတွေးခေါ်ဒီလိုမျိုးမှကျရောက်နေတဲ့လူတိုင်း Is, သို့မဟုတ်ပါကတစ်ဦးအစွန်းရောက်မြိတ်၏ထိနျးသိမျးဖြစ်ပါသည်? ဒေါက်ဂလပ်ကကျွန်တော်တို့အများစုကသဘောပေါက်ထက်ပိုပြီးအဖြစ်များရဲ့စာရငျးယူ. "မကြာမီကသုတေသနလုပ်ငန်းပြတော်မူပြီ အမေရိကန်များ၏ထက်ဝက်ခန့်မှာအနည်းဆုံးတစ်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီယုံကြည်," သူမကပြောပါတယ်. "သင်ပျှမ်းမျှလူမှာရှာနေ; လူငျသညျလမျးပျေါမှာကိုဖြတ်ပြီးလာပေလိမ့်မည်။ "
ဒါကလည်းများ၏မြင်ကွင်းကိုင် ရော့ Brotherton, အဘယ်သူ၏ အသစ်စာအုပ်, သံသယဖြစ်ဖွယ်စိတ်ကို, ပူးပေါင်းလုပ်ကြံအတွက်ယုံကြည်ချက်မှကျွန်တော်တို့ကို predispose သောစရိုက်များကိုလေ့လာ. သူကတရားသဖြင့်စီရင်၌ထိုင်ဆန့်ကျင်သတိပေး, ကြှနျုပျတို့အားလုံးသံသယဖြစ်ဖွယ်စိတ်ထဲတွင်ရှိကတည်းက - ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်. ပုံစံများဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေခြိမ်းခြောက်မှုမှအထိခိုက်မခံဖြစ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကိုသဘာဝကိုမကြာခဏသင်ရမှထွက်သည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှင်သန်ကူညီပေးခဲ့အဘယ်သို့သောအ. "ကွံသီအိုရီစာအုပ်တွေသူတို့ကို debunking ၏အမြင်အမှတ်ကနေမှာလာလေ့ရှိပါတယ်. ငါတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားချဉ်းကပ်ယူချင်တယ်, ထိုသီအိုရီစစ်မှန်တဲ့သို့မဟုတ်မမှန်သောရှိမရှိ၏တပြင်လုံးကိုပြဿနာ sidestep နှင့်စိတ်ပညာ၏ရှုထောင့်ကနေမှာလာရန်,"သူကပြောပါတယ်. "ဒီစိတ်အားထက်သန်စွာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘက်လိုက်, ထိုအချိုးညီမျှမှုဘက်လိုက်, အတည်ပြုချက်ဘက်လိုက်. ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုယုံကြည်ဘယျကွောငျ့ဖွင့်သတိမထားမိဘဲလိုက်တယ်အမှုအရာယုံကြည်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောငါတို့စိတ်ထဲတွင်သို့ built သည်ဤ quirks ရှိသည်။ "
လန်ဒန်သူလျှိုအတွက်ဘင် Whishaw, ယခုနှစ်အရှိဆုံးကောင်းချီးသည်ဗြိတိသျှပြဇာတ်ထဲကတစ်ခု, အရာအကြောက်လွန်ရောဂါစတိုင်တစ်ခုအံ့မခန်းဥပမာထဲမှာတူညီမှုများပျက်စီး. ဓါတ်ပုံ: ဘီဘီစီ / WTTV
"စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးဘာမှဖြစ်ပျက်အခါတိုင်း, ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ခဲ့ကွောငျးယူဆဆီသို့ဦးတည်သည်ဤဘက်လိုက်မှုရှိသည် - တစ်စုံတစ်ယောက်ကစီစဉ်ထားကြောင်း, နောက်မှာရည်ရွယ်ချက်သို့မဟုတ်အေဂျင်စီအချို့မျိုးရှိကွောငျးကို, အစားကြောင့်ပဲမတော်တဆမှုခဲ့စဉ်းစားထက်, သို့မဟုတ်ပရမ်းပတာ, သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုတစ်ခုမရည်ရွယ်သောအကျိုးဆက်။ "ဒီစိတ်အားထက်သန်စွာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘက်လိုက်, Brotherton ကပြောပါတယ်, အစောပိုင်းကလေးဘဝမှရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်. သငျသညျလူငယ်တစ်ဦးသည်ဆိတ်သငယ်ကိုမေးခဲ့လျှင် "တစ်စုံတစ်ယောက်ကနှာချေအဘယ်ကြောင့်, ဆိတ်သူတို့ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်ထိုသို့ပြုကြသည်ကိုထင်, လူတစ်ဦးကယ့်နှာချေမွေ့လျော်ရမည်ဟု. ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းမမအရာအားလုံးကိုရည်ရွယ်ကြောင်းသင်ယူဖို့ကိုစတင်ကြောင်းသာလေးငါး၏အကြောင်းကိုအသက်အရွယ်ပြီးနောက်ဒါဟာင်. ကျနော်တို့ကအလိုအလျှောက်တရားစီရင်ခြင်းကို override နိုင်ပါတယ်. သို့သော်သုတေသနလုပ်ငန်းနေဆဲပင်လူကြီးသို့ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိနေမည်ကြောင်းပြသထားတယ်။ "
ဥပမာအားဖြင့်, လေ့လာမှုများကပြသပြီ လူအရက်မသောက်ရသောအခါ, သူတို့တမင်ဖြစ်ဘဲလျက်အဖြစ်စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးလုပ်ရပ်အနက်ကိုဘော်ပြဖို့ပိုများပါတယ်. "သင်အရက်ဆိုင်မှာနေတစ်စုံတစ်ယောက်ကသင် jostles နှင့်သင့်သောက်စရာတွေဆီကိုကူးစက်လျှင်ဒါ, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးသောက်င်လျှင်, သင်တစ်ဦးအပြစ်မဲ့အမှားကြောင့်ပယ်ရေးထားစေခြင်းငှါ,. သင်တို့မူကားအနည်းငယ်သောက်နေလျှင်, ထို့နောက်သင်သည်သူတို့ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်ပြုထင်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိနေ, ဒါကြောင့်တစ်ဦးရန်လိုလုပ်ရပ်ခဲ့၏။ "
အများဆုံးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များလိုပဲ, စိတ်အားထက်သန်စွာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘက်လိုက်မှုမှကျရောက်နေတဲ့လူဦးရေကိုဖြတ်ပြီးကွဲပြားခြားနားသည်. "တချို့လူတွေအခြားသူများထက်ကပိုပြီးဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါ။ " ထိုအ, Brotherton ကရှင်းပြသည်, ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီအတွက်လွယ်ကူစွာထိခိုက်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်ချက်များအကြားငယ်လေးတစ်ဒါပေမယ့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်.
Related: 9/11 truthers (သဘာဝကျကျ) Osama Bin Laden ရဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီစွဲသတိထား
ပြင်ပအကြောင်းအချက်များလည်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစား, ဟုတ်ပါတယ်. ရိုင်ယန်သည်အ, အဘယ်သူသည်ငါသည်သူ၏နောက်ဆုံးအမည်ချန်လှပ်ကြောင်းမေးလျှင်, တစ်ခုတည်းသြဇာတစ်ဦးချင်းစီ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအလွန်အရေးပါခဲ့သည်. ဒါဟာဂျော်နီခဲ့သည်, မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့် bandmate, သူ့ကိုကမ္ဘာကအစိုးရအကြောင်းစာအုပ်တွေနဲ့ CD များပြသနှင့် "အမြိုးမြိုးတစ်ဦးဂုရုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်" သူ. အ truther လှုပ်ရှားမှုသို့ကိုယျတျော inducting အဖြစ်တချိန်တည်းမှာ, "သူကငါကြားဘယ်တော့မှင်ဂီတဖို့ကျွန်မကိုမိတ်ဆက်နှင့်အမှန်တကယ်ကိုခစျြခဲ့". မိမိအပါဝင်ပတ်သက်မှု၏အမြင့်မှာ, ရိုင်ယန်ကသူပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးယုံကြည်သည်ကပြောပါတယ်, "အပါအဝင်chemtrails"- လေယာဉ်အားဖြင့်ကျန်ကြွင်းရစ်သောလမ်းကြောင်း noxious တို့ကိုနှိမ့်ရည်ရွယ်ဓာတုပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အဆိပ်ကလူမဆံ့သောစိတ်ကူး; က AIDS ရောဂါနှင့် အီဘိုလာရောဂါ လူဦးရေထိန်းချုပ်ဖို့အစိုးရများကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ကြ; အကြောင်း လဆင်းသက် faked ခဲ့သည်; apricots, ကနေဖြည်ချတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုခေါ် laetrile ကင်ဆာများအတွက်ထိရောက်တဲ့ရောဂါပျောက်ကင်းခဲ့, ဒါပေမယ့် FDA ကအားဖြင့်ပိတ်ပင်ထားခြင်းနှင့် Big Pharma ဆေးဝါးများ၏အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရန် quackery အဖြစ်ပယ်ချခဲ့. "ငါသည်ဆိုးဆိုးရွားရွားငါ့မိသားစုငါ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာ. ဒါဟာသင် '' နိုး '' လိုအမြဲသင်အများဆုံးနှစ်သက်သောသူမြားရဲ့. ငါအကျယ်ရှက်စရာငြင်းခုံမှုများနှင့်အငြင်းပွားမှုများအတွက်တက်အဆုံးသတ်,"သူကပြောပါတယ်.
သို့သော်ထိုဒုက္ခထက်ကျော်လွန်ပါကသူ့ကိုရန်နီးစပ်သူတို့အဘို့စေသော, ရိုင်ယန်ရဲ့ unorthodox ယုံကြည်ချက်တွေကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေခဲ့ကြ? ကရင်ဒေါက်ဂလပ်အဖြစ်အန္တရာယ်များသော theorising အားလုံးပူးပေါင်းကြံစည်မှု rubbishing သတိထားဖြစ်ပါသည်. "အဲဒီလမ်းအတွက်စဉ်းစား, ဒါကြောင့်အချို့သောအပြုသဘောအကျိုးဆက်များရှိရမည်. လူတိုင်းကိုသူတို့အစိုးရများကပြောကြားခဲ့ကြသည်သောအရာကိုလက်ခံရုံပတ်လည်မှာသှားလြှငျ, တာဝန်ရှိသူများ, ဆေးဝါးကုမ္ပဏီတွေက, အကြင်သူသည်, ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သိုးတစည်းဖြစ်လိမ့်မယ်, တကယ် ". သို့သော်ငြားလည်း, အမူအကျင့်အပေါ်အချို့သောသီအိုရီ၏သက်ရောက်မှုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်. ဒေါက်ဂလပ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သုတေသနလုပ်ငန်း [pdf download,] ဗြိတိသျှအစိုးရတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည့်အိုင်ဒီယာကိုထိတွေ့မှုပြတော်မူပြီ မင်းသမီးဒိုင်ယာနာ၏အသေခံခြင်း နိုင်ငံရေးတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ကိုလျှော့ချလူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို. အလားတူပင်, ကြောင်းဖော်ပြတဲ့စာသားကိုဖတ်တဲ့သူဘာသာရပ်များ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလိခဲ့သည် ရန်ပုံငွေရှာဖွေလျက်သိပ္ပံပညာရှင်များသူတို့ရဲ့ကာဗွန်ခြေရာကိုလျှော့ချရန်အရေးယူချင်မှလျော့နည်းဖွယ်ရှိခဲ့ကြသဖြင့်. နှင့် Anti-ကာကွယ်ဆေးပူးပေါင်းကြံစည်မှုဇာတ်လမ်းများ သူတို့သားသမီးကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့လူလျော့နည်းဖွယ်ရှိပါစေ, ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်.
ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီထုတ်ချေမှုန်းပစ်ဖို့ကြိုးစားသင့်, ထိုအခါ? Brotherton ရဲ့အငြင်းအခုံ၏တစိတ်တပိုင်းသူတို့သည်ငါတို့ဦးနှောက်ပြောင်းလဲထားသောလမ်း၏သဘာဝအကျိုးဆက်အနေကြောင်း. မသာကြောင်း, ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုငြင်းဆန်ခဲ့သည်ဖို့ကြိုးစားနေရလဒ်များကိုနိုင်. "သင်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီအသစ်ကိုဖို့ကြိုးစားနေစတင်မဆိုအချိန်, တကယ်ယုံကြည်သူလူအများအတွက်, သောပူးပေါင်းကြံစည်မှုကိုမှန်ကန်ဖြစ်လျှင်သူတို့မျှော်လင့်ထားမယ်လို့အတိအကျဘာင်,"သူကပြောပါတယ်.
Swami ကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုရှုမြင်. "ကျနော်တို့ကိုပြုပြီးပြီကြောင်းစမ်းသပ်အလုပ်က conspiracist ideation လျှော့ချရန်ဖြစ်နိုင်သမျှရဲ့ပြသထားတယ်။ " ဘယ်လို? Swami တစ်နှုတ်လုပ်ငန်းတာဝန်စဉ်အတွင်း Analytics စဉ်းစားရန်အားပေးအားမြှောက်ခဲ့သူတွေကိုနောက်၌ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီကိုလက်မခံဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်. သူ့အတွက်, ဒီပညာရေးများအတွက်အရေးပါသောအလားအလာအခန်းကဏ္ဍမှာအရိပ်အမြွက်. "အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်, တစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအဆင့်မှာ, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစဉ်းစားတွေးခေါ်မြှင့်တင်ရန်, ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်ပေးဖို့။ "ဒါပေမယ့်သမျှသောမင့်. လူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်စားလှယ်များအတွက်ယုံကွညျခွငျးရှိရသောအခါ, သူတို့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ကြပြီးအကျင့်ပျက်ခြစားမှုမဟုတ်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချ, သူတို့ coverups အတွက်ယုံကြည်ဖို့နည်းပါးများပါတယ်. နှင့်ကော်ပိုရိတ်င့်လင်းမြင်သာ - အဘယ်ကြောင့်နိုင်ငံရေးအရင့်လင်းမြင်သာတတ်နိုင်သမျှကျားကန်ခံရဖို့ဖြစ်ကောင်းဒါကင်, လွန်း. "လူတွေအများအပြားဒုက္ခဖြစ်ရပ်တစ်ခု၏ကြီးမားတဲ့အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်အစိုးရရဲ့ဇာတ်လမ်းများလက်ခံရှိ, သူတို့ယုံကြည်ထားသည်ဟုအဖြစ်ရှုမြင်နေတာပါသောကြောင့်,, သူတို့မုသာဝါဒီအဖြစ်ရှုမြင်နေတာပါ,"Swami စောဒကတက်သည်.
Related: ကမ္ဘာမြေပြားချပ်ချပ်ဖြစ်ပါသည်? သူဘာဂြိုဟ်သည်?
တိုးတက်လာသောဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းနှင့်နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးယဉ်ကျေးမှု၌အပြောင်းအလဲများခြောကိုကူညီလိမ့်မယ်. သို့သော်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်ပယ်ချနိုင်ပါသည်, လွန်း. ရိုင်ယန်ရဲ့အမြင်သူ၏ "ဂုရု" ၏ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူပြောင်းလဲ.
သူလက်ထပ်နှင့်တစ်ဦးကလေးခဲ့ပြီးနောက် "ငါသည် kinda ဂျော်နီနှင့်အဆက်အသွယ်ထဲကကျဆင်းသွား,"သူကပြောပါတယ်. "သူကစကိုထပ်မံနှင့်နောက်ထပ်ရတဲ့ခဲ့သည်, ငါပဲပါဝင်ပတ်သက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းဘားနှင့်အတူတက်မစောင့်နိုင်ဘူး "သူကအခြားရွေးချယ်စရာရှင်းလင်းချက်အဘို့အကြည့်ဖို့စတင် - ။ လျော့နည်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာ, ဒါပေမယ့်ပိုပြီးယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်သူမြား. "ငါသည်အမျိုးသားရေးအဆင့်တွင်ဆွေးနွေးသည်လူများကြည့်ရှု, သမ္မတအဘို့နှင့်ထိုကဲ့သို့သော. platitudes နှင့်အထွေထွေထဲမှာစကားပြောဒီလူတွေတကယ်ငါ့ကိုစားသို့မဟုတ်သတ်ပစ်ရန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပူးပေါင်းကြံစည်မှုနောက်ကွယ်မှဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်သူမျှမကလမ်း. သူတို့ဟာတစ်ခုခုကိုကြောင့်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ကောင်းသောအလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်ခဲ့ကြ, ငါသည်ကိုယ်အသက်ကိုနေထိုင်သောခဲ့ပုံကိုပျော်ရွှင်စဉ်းစား.
"ဒါက Epiphany ခဲ့သည်, အမှန်. ငါအခမဲ့ခဲ့. ငါပျော်ခဲ့တယ်. ထိုပျက်စီးခြင်းနှင့်မှောငျ၏အဘယ်သူမျှမအစဉ်အဆက်လာဟောကိန်းထုတ်နှင့်ကတိပြုခဲ့သည်။ "ရိုင်ယန်သည်အ, ထို့နောက်သဖြင့် 27, ထူးထူးဆန်းဆန်းစီးနင်းကျော်ခဲ့. မကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးတို့သည်တပ်ဖွဲ့များဆန့်ကျင်သူ့ကိုချွတ်ချွတ်သောကမ္ဘာကြီးဟာသူလျှိုဒရာမာအပေါင်းတို့ကိုအယူခံဝင်ခဲ့. နှင့်အချို့သောနည်းလမ်းများတွင်ပိုမိုစိတ်ပျက်စရာ - သို့သော်စစ်မှန်သောဘဝလျော့နည်းပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏. သူဘာထင်ထားဘူးတကယ်အမှုအရာကိုပုံဖော်သောတပ်ဖွဲ့များဖြစ်ကြ? "ဒီနေ့ခေတ်ကမ္ဘာ့အမှားသည်အဘယ်သို့အများစုဟာ - ကောင်းစွာ, ငါအရည်အချင်းမရှိနှင့်လောဘကဆငျးသကျထားမယ်လို့. သနားစုံမက်တစ်မရှိခြင်း။ "
← အကောင်းဆုံးက iPhone နှင့် iPad app များကို 2015 သင့်ရဲ့အိမ်သာစက္ကူသင့်အကြောင်းမိန့် →